मेरो छोराकी आमाको म्यासेज | We Nepali
मेरो छोराकी आमाको म्यासेज
वीनेपाली | २०७३ चैत २५ गते २१:३३
डा. बच्चुकैलाश कैनी
मेरो छुट्टीको दिन थियो । सधै झैँ बिहानको चिया पिउंदै म बेडमा बसेको थिएँ । छुट्टीको दिन अरु के नै काम हुन्छ र ! फेसबुक हेर्ने, साथीभाई वा इस्टमित्रसँग कुराकानी गर्ने, घर परिवारसँग समय बिताउने र घुमफिर गर्ने । त्यो दिन पनि बिहानै मैले फेसबुक खोलें । फेसबुकको म्यासेजरको इनबक्समा एउटा म्यासेज रहेछ । खोलें र झट्ट हेरें ।
मेरो अनुहार एकदम रातो भयो । मैले मसँग बसेकी मेरी श्रीमतीतिर हेरें । झन्डै उनको नजर मेरो फेसबुकतिर परेको रहेनछ । यदि उनले त्यो म्यासेज हेरेको भए मैले कुनै पनि अवस्थामा त्यसको ‘डिफेन्ड’ गर्न सक्ने स्थिति थिएन । त्यति मात्रै हैन, मेरी श्रीमतीसँग झगडा हुने वा मेरो घर परिवार नै तहसनहस हुन सक्ने सम्मको अवस्था आउन सक्थ्यो ।
म एकदम झस्कें । मेरो होसहवास उड्यो । मेरो सातो गयो । न त मैले त्यस्तो कुनै कुरा सोचेको थिएँ, न त कुनै कुरा गरेको नै थिएँ । जीवनमा पहिलो पटक कहिले नसोचेको र नभोगेको कुरा सुन्नु पर्दा कस्तो हुन्छ भन्ने अनुभव भयो । यो यस्तो अनुभब थियो जुन कुरा म कसैसँग बाँड्न सक्दिन थिएँ । किनकी, यो मेरो नैतिकता, मान मर्यादा र प्रतिष्ठासँग सरोकार राख्ने बिषय थियो ।
मैले पटक पटक त्यो म्यासेज पढें । त्यसमा खास कुनै लामो कुरा लेखिएको थिएन । केवल दुई वटा वाक्यांशहरु थिए, ‘मेरो जीवनमा तिमीले मलाई निकै धोका दियौ । अब तिम्रो र मेरो बच्चाको भबिष्यको जिम्मा तिमीले पनि लिनुपर्छ ।’ म झस्कनु पर्ने कारण अर्को पनि थियो । किनकी यो म्यासेज मेरो कलेजमा पढ्ने एकदम मिल्ने साथी कल्पनाले गरेकी थिई । मेरो श्रीमतीलाई पनि थाहा थियो कि उ मेरो एकदम मिल्ने साथी थिई ।
मलाई कल्पनासँग एकदम रिस उठ्यो । उसले किन त्यस्तो म्यासेज गरी मैले बुझ्न सकिनँ । मैले कल्पनालाई जवाफ लेखें, ‘तिमीले के लेखेको यस्तो ? के कुरा हो यो ? तिमी किन मेरो प्रतिष्ठामा आँच आउने कुरा गर्छौ ?’
उसको जवाफ झन्डै एक घण्टासम्म पनि आएन । त्यही बिचमा मैले निकै कुराहरु सोचें । कतिबेला एकदम रिस उठ्यो भने कतिबेला मनमा निकै आशंकाहरु पनि उब्जे । एक मेरो मन एकदम हतास भयो तर अर्को मन मैले के बिगारेको छु जस्तो पनि लाग्यो ।
जब उसले म्यासेन्जरको इनबक्समा केही कुरा लेख्न थालेको देखें, एकदम धुकधुकी बढ्यो । त्यो म्यासेज एकदम छोटो थियो, ‘ह्याप्पी अप्रिल फूल । ‘ उफ ! म अनि कस्तो, आज अप्रिल फूल भन्ने भुसुक्कै बिर्सेछु ।
मैले मनमनै सोचें, उसको जिस्कने बानी उस्तै रहेछ । एकछिन अघिसम्म हतास र झस्केको मेरो मन एकपटक फेरी बेस्सरी हाँस्यो ।